လူ့ ဦး နှောက်ကိုချစ်ရန်အတွက်တည်ဆောက်ထားသည် (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
Update ကို: တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင် Dawn မှာလိင်: လူသားများသည်လိင်ဆိုင်ရာသစ္စာရှိမှုနှင့်လူကြိုက်များသောစိတ်ထားများဖြစ်ပြီးလူကြိုက်များသောရုပ်ပုံများကကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စေလိုသည်။ ကြည့်ပါ -လိမ္မာပါးနပ်သောလူသားနှင့်ဒဏ္Womanာရီပုံပြင်ဒဏ္Myာရီ။ ”
သင့်ရဲ့မှေ့ eyeteeth သင်၏မေတ္တာအသက်အဘို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်း
လူ့အပြုအမူသည်အလွန်ကွဲပြားသည်။ အခြားမျောက်ဝံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ မိသားစုပြုစုပျိုးထောင်မှုစသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ အကျိုးဆက်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လျောက်ပတ်သောမယားတမျိူးသည်ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့်သာသက်ရောက်သည်။ (အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး နှောက်ထဲသို့ကမောက်ကမဖြစ်မှုသဘောထားတွေကိုကြိုးတပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုအလွယ်တကူလက်ခံပုံရပါတယ်။ )
တကယ်တော့ကျနော်တို့များမှာ ပရိုဂရမ် နှောင်ကြိုးနဲ့တွဲဖို့ - ငါတို့ခါးပတ်တွေထဲကိုထစ်တွေထပ်ထည့်ဖို့စီစဉ်ထားသလိုပဲ။ ပရိုဂရမ်အားဖြင့်ဆိုလိုတာကငါတို့ ဦး နှောက်ကိုတပ်ဆင်ထားပြီဆိုပါစို့၊ အဲ့ဒီအပြုအမူတွေမှာငါတို့မဟုတ်ရင်ထက်နိမ့်ကျတဲ့အနိမ့်အမြင့်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီပရိုဂရမ်နှစ်ခုလုံးကငါတို့မျိုးရိုးဗီဇကိုအစေခံစေတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကျနော်တို့အလုံအလောက်ရှည်လျားနှောင်ကြိုးနေဖို့ ဆိနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲ, ထို့နောက်သူသည်စောင့်ရှောက်သူများထံမှအကျိုးကျေးဇူးများ။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အလွယ်တကူမငြိမ်မသက်ကြီးထွားလာပြီးအခြားမိတ်ဖက်များ၏ပုံစံဖြင့်ဝတ္ထုမျိုးရိုးဗီဇကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်အီတလီမှသုတေသနပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏ပျားရည်ဆမ်းမှုအာရုံကြောဓာတုဗေဒသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်သည် နှစ်နှစ်အတွင်းကိုချွတ်ကျီ.
Pair bonding သည်လေ့လာသင်ယူသောအပြုအမူတစ်ခုမျှမဟုတ်ပါ။ မရှိရင် အာရုံကြောဆက်စပ် ဒီအပြုအမူနောက်ကွယ်မှ, ဤမျှလောက်မေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့ခြင်းနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောယဉ်ကျေးမှုကိုဖြတ်ပြီးတက်ချိတ်တွဲရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဆိုပါစုံတွဲကို-Bond တတ်ပြီး In-built နှင့်အများကြီးစောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူမွေးကင်းစ bonds သော program တစ်ခုလိုပဲ activated ခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ တကယ်တော့အဲဒီနှစ်ခုအစီအစဉ်များကိုဦးနှောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပေါ်ထွန်းနှင့်အတူတူပင် neurochemicals employ ။ * အဆိုပါ Coolidge Effect (အကျွမ်းတဝင်ရှိသောလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကိုလေ့ကျင့်ပြီးဝတ္ထုတစ်ခုကိုလိုချင်တောင့်တသောစိတ်သဘောထားသည်) လည်းအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပရိုဂရမ်များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမကြာခဏလွှမ်းမိုးနေခြင်းသည်သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအားကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သြဇာသက်ရောက်စေသောအချက်ကိုမပြောင်းလဲစေပါ။
ကျွန်တော်ဤကဲ့သို့သောစိတျ override တောင်မှအခါ, သူတို့အနားတွင်ပုန်း။ ဒါကြောင့်သူတို့ကဝတ္ထုမိတ်ဖက်လိုက်စားရမ္မက်၏မျက်နှာကို၌သစ်စာစောငျ့ဆက်လက်တည်ရှိဖို့ရှေးခယျြပါလျှင်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုမကြာခဏသူတို့သွား grit ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ အများစုသောလူသားမြားကိုသူတို့ကလေးတွေရှိသည်မဟုတ်ရှေးခယျြလျှင်ပင်, အစွမ်းထက်မိဘကလေး Bond Impulses သတင်းပို့နှင့်အတူကြိုးနေကြသည်။ (ဥပမာ, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသူမ၏ neurochemistry နှင့်အတူဝငျရောကျစှကျပြီ, လျှင်ဖွစျနိုငျပေမဲ့) ဒါဟာသူမ၏လေးတွေနှင့်အတူဘွန်းပါဘူးသူတစ်ရှားပါးမိခင်ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင်လူတွေလိင်နှင့်အော်ဂဇင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဘယ်တော့မှရှေးခယျြနိုငျသျောလညျးအပြန်အလှန်အာရုံခံအုပ်စုများကိုသူတို့ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်သူတို့ကိုအစွမ်းထက်အတွေ့အကြုံကိုပေးစေခြင်းငှါအဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
တနည်းကား, ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကြောင့်၏ပစ္စုပ္ပန်များမှာ ဦးနှောက်ထဲမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦများအထူးသဖြင့်“ the ဆုလာဘ် circuitry။ " ဒီယန္တရားကို neurochemical လို့ခေါ်တယ် dopamine ("ငါရမယ်!" အာရုံကြောဓာတု) ။ ထို့ကြောင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ကလေးတစ် ဦး ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်လက်တွဲဖော်အသစ်များကိုမကြာခဏရှာဖွေခြင်းတို့သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည် ကြိုး.
ဒီအာရုံကြောဓာတုဆုလာဘ်မရှိရင်၊ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ငွေချေးစာချုပ်တွေဟာနှောင်ကြိုးကိုတွဲဖို့အနှောင့်အယှက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဟာပုံမှန်, ကှေးကှဲသောနို့တိုက်သတ္တဝါများအစီအစဉ်အတွက်အခြေချချင်ပါတယ် အိုင်စီတီ ဆုလာဘ်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆအတွက်ထူးခြားတဲ့ဦးနှောက်ကို Activation ၏သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် pair တစုံ-Bond voles (non-pair တစုံ-Bond အမျိုးမျိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ) ။ ထိုအ pair တစုံ-Bond မျောက်ဝံများအလားတူဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုဖေါ်ပြခြင်းဒေတာရှိပါတယ်။ ကြည့်ရှုပါ: တစ်ဦး monogamous မျောက်အတွက် pairbonding ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ သုတေသနပိုမိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်တွဲဆက်နေသောနို့တိုက်သတ္တဝါများ (ဥပမာ - တွဲဖက်ခြင်းမရှိသောဘောဘိုဗိုများနှင့်မတူဘဲ) တွင်အလားတူအာရုံကြောဆက်စပ်မှုများရှိသည်။ ဇီဝဓာတုဗေဒ [နှောင်ကြိုး၏] သည်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်လူသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်များတွင်လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်။ ”
အားလုံးနို့တိုက်သတ္တဝါများလိင်အကြိုးကိုရှာဖွေနေစဉ်, pair တစုံ bonders လည်းမှတ်ပုံတင်ရန် တစ်ဦးချင်းစီအိမ်ထောင်ဖက် ကြိုးအဖြစ်။ ဒီက hidden pair တစုံ-Bond အစီအစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရူးနေပြီဖြစ်လာတက်ပွင့်လင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်းစားထံမှခွါမကွဲပြားကြသောအခါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများ၌လည်းညိုးငယ်။ Pair ကို-Bond voles လွန်းတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကနေကွဲကွာတဲ့အခါမှာ pining လက္ခဏာပြသပါ။
ပိုပြီးသက်သေအထောက်အထားများလိုအပ်ပါသလား? ကျွန်တော်သစ်ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကအဘို့အ jilted အခါပေါ်ပေါက်သောမခွဲခြားဒေါသအမျက်စဉ်းစားပါ။ မနေ့ကသူမ၏မျိုးအောင်သောနွားထီးတကောင်, ယနေ့သူမ၏အိမ်နီးချင်းနဲ့သူ့ရဲ့တာဝန်မပါလျှင်တစ်ဦးကနွားမ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, အတော်လေးလစျြလြူရှုသည်။ လိုအပ်တဲ့အာရုံကြောဆက်စပ်မချို့တဲ့ဘဲစေ့စပ်သူမတစ်စုံ bonder မဟုတ်ပါဘူး။
ငါတို့နှစ် ဦး ငွေချေးစာချုပ်စာချုပ်များကိုအဘယ်ကြောင့်ဂရုစိုက်သင့်သနည်း
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုပြောင်းလဲရန်တိုက်တွန်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်မှုနှောင်ကြိုးကိုမကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်စေသည့်အချက်ကို ထောက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစိတ်မချရသောအစီအစဉ်ကိုအာရုံမစိုက်ဘဲဆက်လက်နေသင့်သည်မဟုတ်လော။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုံတွဲတွဲမှုတိုက်တွန်းမှုသည်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး နှင့်အတူပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရန်အာမခံချက်မဟုတ်သော်လည်းရှင်းလင်းစွာနားလည်မှုသည်ဆက်ဆံရေးရောင့်ရဲမှုအတွက်အရေးကြီးသောသဲလွန်စများနှင့် ပို၍ သာယာချမ်းမြေ့ခြင်းတို့ကိုရရှိစေနိုင်သည်။ ငါတို့မလုပ်ဘူး ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဗီဇများ၏ပွတ်တိုက်အားကျဆင်းစေသည့်အစီအစဉ်နှင့်ကိုက်ညီရန်။
ပထမဦးစွာကျနော်တို့ pair တစုံ bonders ၏ရှည်လျားသော line ကနေလာကြပေမည်။ မကြာသေးမီကကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းရှာဖွေမှု pair တစုံ Bond တစ်အပေါ်ယံယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ရပ်ဆန်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဖြောင့်မတ်အစောပိုင်းလူ့များ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိ Ardipithecus (4.4 နှစ်ပေါင်းသန်းဟောင်း) ကြှနျုပျတို့၏လိုင်းနှင့် chimp လိုင်းရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့စဉ်နဲ့ကွဲသွားခဲ့ရတယ်ဆိုလိုသည်။ တချို့ကသုတေသီများသောကွောငျ့ hypothesize Ardipithecus ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းသည်အရွယ်အစားတူညီကြသည်။ နမူနာတွင်ကြီးမားသောချွန်ထက်သောခွေးတစ်ကောင်မရှိသဖြင့် Gorillas နှင့်ချင်ပန်ဇီမျောက်များကိုဖော်ပြသည့်အပူရှိန်အမျိုးသမီးများအတွက်အပြင်းအထန်မကြာခဏအကြမ်းဖက်ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဤ တတျနိုငျသ ယောက်ျားအမျိုးသမီး-ဖြစ်နိုင်သည် (နှစ်ခုခြေထောက်ပေါ်လမ်းလျှောက်မျက်နှာသာလို) အစားအစာတင်ဆောင်လာသောအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောဘိုးဘေးတို့ကိုပြု၏ထက်သူတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အချိန်ပိုမိုခွငျးနှင့်အတူအတန်ငယ် monogamous ဆက်ဆံရေးသို့ဝငျစတင်ခဲ့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကြည့်ရှုပါ: အစောပိုင်းလူသားလိင်များအတွက် Walking Start ခဲ့သလား တိုတောင်းသော, ကရာ bonobo chimps ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးဆုံးလူနေမှုဆွေမျိုးသားချင်းထဲမှာ, တကယ်ဒီတော့နီးစပ်မရှိကြပေ။ Non-pair တစုံ bonders အဖြစ်သူတို့ရောငျ့ရဲစျြခွငျးမတ်ေတာဘဝတွေကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးဖို့အနည်းငယ်သာရှိနိုင်ပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာစုံတွဲနှောင်ကြိုးနက်ရှိုင်းသော, ကျန်းမာရေး-မြှင့်တင်စိတ်ကျေနပ်မှု၏လူသားမြားသညျအာရုံပေးထားပါတယ်။ သုတေသီများပျော်ရွှင်မှုကိုအချက်များတိုင်းတာတဲ့အခါ, အကြောင်းအရာ pair တစုံနှောင်ကြိုးအရေးကြီးဆုံးတစ်ဦးအဖြစ်က register လုပ်သွား ပျော်ရွှင်မှု၏ဆုံးအဖွတျ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ pair တစုံ-bonder ဝါယာကြိုးတစ် function ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသနအိမ်ထောင်ဖက်အကြားနွေးထွေးသော, နှစျသိမျ့ထိဖြစ်ပေါ်လာသောကွောငျးဖျောပွသ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သော ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ရှည်၏။ "စုံတွဲများအကြားနွေးထွေးသောထိတွေ့မှုတိုးမြှင့်စိတ်ဖိစီးမှု - အထိခိုက်မခံစနစ်များအပေါ်အကျိုးရှိသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။ "
pair တစုံ-Bond အိမ်ထောင်ဖက်အကြားချစ်ခင်အဆက်အသွယ်ပုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည် exaptation မွေးကင်းစနှင့်စောင့်ရှောက်သူများနှောင်ကြိုးအတူတူသက်သာသက်သာအဆက်အသွယ်၏။ လူကြိုက်များတဲ့ဆောင်းပါးအတော်များများကမကြာခဏအော်ဂဇင်ကအိမ်ထောင်ဖက်တွေကိုအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာအလေးအနက်ဖော်ပြတယ်။ သို့သျောလညျးထိုယူဆချက်ကျနော်တို့နှောင်ကြိုးနှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အနီးကပ်မှအကျိုးခံစားရဖို့ကြိုးရှိသည်သတိမမူ, အတော်လေးဆိတ်ကွယ်ရာအော်ဂဇင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိကနေ။ ဤအချက်အပေါ်ရှင်းလင်းပြတ်သားကျွန်တော်ထင်ထက်မေတ္တာ၌တည်းခိုပိုပြီးအင်အားစိုက်ထုတ်စေနိုင်သည်။
နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် pair တစုံ bonders သရဲခြောက်သောစေခြင်းငှါအားနည်းချက်.
* [Speaker Summary မှ Larry Young မှ၊ “ လူမှုနှောင်ကြိုးနှင့်မနုamဗေဒ၏ Neurobiology” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ပါရဂူဘွဲ့မှ]
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လူသားများကဲ့သို့အလွန်အမင်းလူမှုရေးဖြစ်ကြပြီးအိမ်ထောင်ဖက်အကြားရှည်လျား-တည်မြဲ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဒါဟာအိမ်ထောင်ဖက်အကြားရှည်လျားတည်တံ့လူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းပေါ်လာပါဘူးသမျှသောနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်များ၏ 95 ရာခိုင်နှုန်းဆနျ့ကငျြဘ၌တည်ရှိ၏။ pair တစုံဘွန်းအခြေခံဦးနှောက်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇယန္တရားများဆန်းစစ်လေ့လာရေးလူမှုရေးဆက်ဆံရေးထူထောင်အတွက်ဦးနှောက်ထဲမှာအနည်းငယ်သော့ချက်ဓာတုပစ္စည်းများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထင်ရှားပါပြီ။ oxytocin နှင့် vasopressin ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လူမှုရေးအချက်ပြမှုများဖို့ဦးနှောက်ရဲ့အာရုံစိုကျဖို့ပေါ်လာပါသည်။ pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းစဉ်အတွင်းအဲဒီဓာတုပစ္စည်းဟာမိတ်ဖက်များနှင့်မိတ်လိုက်၏အကြိုးသဘာဝတရား၏လူမှုရေးတွေကိုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ထူထောင်ဖို့ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်သည့်စနစ် (ဥပမာ dopamine) နဲ့အပြန်အလှန်။ အခြားသူတွေမဟုတ်စဉ်ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်လူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းအချို့သောမျိုးစိတ်ရှိပါသလဲ monogamous နှင့် Non-monogamous မျိုးစိတ်များ၏ဦးနှောက်နှိုင်းယှဉ်သုတေသနကတစ်ဦးချင်း Bond နိုင်စွမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ကြောင်း oxytocin နှင့် vasopressin တုံ့ပြန်သော receptors ၏တည်နေရာကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, monogamous အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လည်းစွဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းတစ် ventral forebrain ဆုလာဘ်စင်တာအတွက် receptors vasopressin မြင့်မားပြင်းအားရှိသည်။ non-monogamous မြက်ခင်း voles အဲဒီမှာ receptors ကင်းမဲ့နေသည်။ receptors non-monogamous မြက်ခင်း vole ၌ဤဆုလာဘ်စင်တာသို့ထည့်သွင်းလျှင်သို့သော်ဤယောက်ျားသည်အမှတ်တမဲ့ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ ဒီလေ့လာမှုတွေလည်းစွဲကဲ့သို့တူညီသောဦးနှောက်ယန္တရားများစွာကိုကြောင်း pair တစုံဘွန်းရှယ်ယာအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မျိုးဗီဇလေ့လာမှု vasopressin အဲဒီ receptor အချို့ဦးနှောက်ဒေသများတွင်အဲဒီ receptor စကားရပ်များ၏အဆင့်အတန်းကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်အထီးအမျိုးသမီးနှင့်အတူလူမှုရေးနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းကုဒ်သွင်းသည့်ဗီဇ၌ DNA ကို sequence ကိုအပြောင်းအလဲထင်ရှားပါပြီ။
2016 လေ့လာမှု: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လူ့ကဲ့သို့ချမ်းသာခြင်းပြသ [ပေမယ့် Non-pair တစုံ-Bond voles မကျင့်]
တစ်ဦးကနယူးဆေး Stop စွဲတတျနိုငျသ? (2018) ။ အဆိုပါဆေးလုံး, အဆိုအရ ကိုးသတင်းများ, မှာ oxytocin-တစ်ဦးဘွန်းနှင့်လူမှုရေးအပြန်အလှန်မြှင့်တင်ရန်လူသိများဟော်မုန်းများ၏အပြုအမူန်းမှာအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။